धेरै यौन सम्पर्क गर्नाले मात्र हुदैन गर्भधारण
एजेन्सी । प्राय जसो व्यक्तिहरुदैनिक एक पटक यौन सम्पर्क गर्नुले सन्तान हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छदैनिक एक पटक यौन सम्पर्क गर्नुले सन्तान हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । यदि तपाईँ तनाबमा हुनुहुन्छ
तपाईको भुँडी कत्रो छ ?ज्यान जाला ………..
कलाकार आरपी भट्टराई शुक्रवार अल्पायुमै दिवंगत भए । उनको निधनको कारण ठूलो भुँडी रहेको धेरैले अनुमान गरे । उनका निकटस्थका अनुसार सुगर, प्रेसर, कालेस्ट्रोल जस्ता रोगबाट पीडित थिए उनी ।
स्तन क्यान्सर रोगको सफल शल्यक्रिया
दाङ, मङ्सिर २४ गते । दाङमा पहिलो पटक स्तनक्यान्सर रोगको सफल शल्यक्रिया भएको छ । दाङको घोराहीस्थित राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा दाङ सैघा गाविस– ५ की ४२ वर्षीया चन्द्रकला थापामगरको स्तनको
कलेजो प्रत्यारोपण नियमित गरिने : स्वास्थ्यमन्त्री
हिमाल पोष्ट /भक्तपुर, २३ मङ्सिर । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले कलेजो प्रत्यारोपणलाई निरन्तरता दिन सरकार जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ । मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रले यहाँ आज आयोजना गरेको
ओठ हेरेर यौन चाहाना बुझ्न सकिन्छ
हिमाल पोष्ट / काठमाडौँ, १८ मङ्सिर ।ओंठलाई महिला सौन्दर्यको प्रतीक पनि मान्ने गरिन्छ । गुलाबी ओंठ त महिलाहरुका लागि झनै आकर्षक मानिन्छ । जस कारण पनि अधिकांश महिलाहरु आफ्नो ओंठ
रुपन्देहीमा ३६ जनामा डेंगुको संक्रमण देखिएको छ
काठमान्डौ ,मंसिर २ । रुपन्देहीमा ३६ जनामा डेंगुको संक्रमण देखिएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार संक्रमित मध्ये धेरै बुटवलका रहेका छन् । जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा गरिएको रगत परीक्षण
रहेनन सभासद "भक्ती पाण्डे"
काठमाडौ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता एवम् सांसद भक्तिप्रसाद पाण्डेको सोमबार ६२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । क्यान्सरबाट पीडित पाण्डे विगत एक वर्षदेखि उपचाररत थिए । उनको सोमबार बिहान ललितपुरको
हिमाली जिल्लामा प्रसूति गराउनेको सङ्ख्या बढ्दो
मुस्ताङ, २२ कात्तिक । हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा स्वास्थ्य संस्थामै पुगेर प्रसूति गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । निःशुल्क प्रसूति सेवा, सुत्केरी भत्ता र न्यानो कपडा पाउन थालेपछि स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति
कतै तपाईको यस्तो बानि त छैन ? होस गर्नुस् !
काठमाण्डौ । निन्द्र भन्दैमा हुन्छ र ? बत्ति बालेर सुत्ने ,मोबाइल लिएर सुत्ने ,घोप्टो परेर सुत्नेहरुलाई खतरै खतराको रिपोट फेला परेको खबर छ । मृत्युको कारण धेरै छन त्यसमा पनि
पाँचतारे होटलको खानामा अखाद्य वस्तु भेटिएपछि हंगामा, खानेको जिब्रोनै काटियो
काठमाडौँ, १६ कत्तिक नेपालकै चर्चित पाँचतारे होटल सोल्टी क्राउन प्लाजाको मेघामल्हर कन्फे्रस हलमा अखाद्य वस्तु भेटिएको छ । बिहीबार साझ कतार एयरवेजको कार्गाे एजेन्सीहरुका लागि आयोजाना गरेको अवार्ड कार्यक्रम पछिको
तिहारमा के खाने,के नखाने ?
काठमाडौं, । हिन्दूहरुको दोस्रो ठूलो पर्व तिहारमा घरआँगन सफा सुग्गर राख्नुु, पटका पड्काउनु र झिलिमिली उज्यालो पार्नु यस पर्वका विशेषता हुन् । यसबाहेक तिहारमा गुलियो र चिल्ला परिकारहरु खाने गरिन्छ
साँझ पनि थपिए ठुलो संख्यामा कोरोना संक्रमित
काठमाडौं- नेपालमा मंगलबार साँझ फेरी ठुलो संख्यामा संक्रमित थपिएका छन् । देशका विभिन्न जिल्लामा गरि
एनका अनलाईन अवार्ड समारोह सम्पन्न
एडीलेड नेप्लिज क्रिकेट एशोसियनले ( एनका) ले आफ्नो खेलकुद सत्रको अन्त्य सँगै गर्दै आएको “अवार्ड
सबैभन्दा बढी भेदभाव र अन्धविश्वास अमेरिकामै छ
एजेन्सी- पछिल्लो समय जातीय मुद्दा र कोरोना भाइरसले थालिएको विश्वकै शक्तिशाली मुलुक अमेरिकामा भेदभाव र